တရား – Thutastar
“အလွန်​​​ကောင်းတဲ့ တရားတစ်​ပုဒ်​” ပဋာစာရီကိုဘုရားဘာတရားဟောခဲ့တာလဲ””
Comments Off on “အလွန်​​​ကောင်းတဲ့ တရားတစ်​ပုဒ်​” ပဋာစာရီကိုဘုရားဘာတရားဟောခဲ့တာလဲ””
“အလွန်​​​ကောင်းတဲ့ တရားတစ်​ပုဒ်​” ပဋာစာရီကိုဘုရားဘာတရားဟောခဲ့တာလဲ”” ပဋာစာရီထေရီမကြီးလင်သေသားသေလို့ရူးသွားတဲ့အကြောင်းတော့လူတိုင်းဖတ်ဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အရူးတပိုင်းဖြစ်နေလို့အ၀တ်တောင်မကပ်တော့တဲ့အခြေအနေကနေပြီးမြတ်ဘုရားက ဘာတရားများဟောလိုက်လို့အရူးပျောက်သွားရတာလဲလို့သိချင်မိလို့ရှာဖွေပြီးသိလိုက်ရတဲ့တရားကိုပြန်ဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ် ☆ ချစ်သမီးပဋာစာရီ အိုရလိမ့်အုံးမယ်၊ နာရလိမ့်အုံးမယ်၊ သေရလိမ့်အုံးမယ်ဆိုတဲ့ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း မရှိဘူးလားလို့-မြတ်စွာဘုရားက မေးတော့၊ ပဋာစာရီက အိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရား ရှိပါတယ်ဘုရား၊ ☆ ထိုအိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရား ရှိပါလျှင် မအို, မနာ, မသေတဲ့ တရားကော မရှိဘူးလားလို့မေးတယ်။ ပဋာစာရီက မအို, မနာ, မသေတဲ့ တရားလဲ ရှိပါတယ်ဘုရား။ ☆ အိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရားလဲရှိတယ်၊ မအို, မနာ, မသေတဲ့ တရားလဲရှိတယ်ဆိုလျှင် ထိုအိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရားကို သင်မကြောက်ဘူးလားလို့ မြတ်စွာဘုရားက မေးတော့၊ ပဋာစာရီက အိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရားကို
မေတ္တာသုတ်ကို နည်းစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရွတ်ဆိုနိုင်ဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအတွက် မျှဝေကုသိုလ်ယူနိုင်ပါသည်။
Comments Off on မေတ္တာသုတ်ကို နည်းစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရွတ်ဆိုနိုင်ဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအတွက် မျှဝေကုသိုလ်ယူနိုင်ပါသည်။
“မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပုံ နည်းစနစ်” တနင်္ဂနွေဂြိုလ်သက် ၆ တနင်္လာဂြိုလ်သက် ၁၅ အင်္ဂါဂြိုလ်သက် ၈ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်သက် ၁၇ စနေဂြိုလ်သက် ၁၀ ကြာသပတေးဂြိုလ်သက် ၁၉ ရာဟုဂြိုလ်သက် ၁၂ သောကြာဂြိ်လ်သက် ၂၁ ———————————- စုစုပေါင်းဂြိုလ်သက် ၁၀၈ ———————————- ၁။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ- “တနင်္ဂနွေဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ အရှေ့မြောက်အရပ်၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ”……ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၆ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊ ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။ ၂။ တနင်္လာနေ့မှာ စရွတ်လျှင်
Comments Off on “ဘုရားပန်း မညှိုးမှ . . . အစွမ်းတိုးမယ်”
ဘုရားပန်း မညှိုးမှ . . . အစွမ်းတိုးမယ်” လူအများစုရဲ့သဘာဝ ၊ အများစုရယ် မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ၊“နတ် ကိုးကွယ်မှု အားသန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်”တွေကဘုရားပန်းသာ ညှိုးချင် ညှိုးပါစေ။နတ်ပန်းတော့ အညှိုးမခံနိုင်ဘူး။ဘုရားစင်မှာ ဆွမ်းခဲဖွယ်ချိုချဉ်ရသာ မရှိရင်သာနေမယ်။နတ်ရှေ့မှာ အုန်းသီးဆိုလည်း အလုံးလိုက်၊ငှက်ပျောသီးဆိုလည်း အဖီးလိုက်။ ယောဂီတို့ အိမ်တွင်းရေး မသာယာချင်ဘူးလား။(သာယာချင်တယ်။)သာယာချင်တယ်ဆိုရင် ဘုရားပန်း မညှိုးပါစေနဲ့။ဘုရားပန်းညှိုးပြီဆိုရင်တော့ အနှေးနဲ့ အမြန်ပဲ ကွာမယ်။အိမ်တွင်းရေး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့၊တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အဆင်မပြေ ၊စိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေဖြစ်ကြမှာပဲ။လုပ်ငန်း၊ကိုင်ငန်း စီးပွါးရေးတွေလည်းအဆင်ပြေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဂါထာတွေ၊ မန္တာန်တွေ အမြှုပ်ထွက်အောင် မရွတ်ချင်နေပါ။ဘုရားပန်း အမြဲတမ်း လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်အောင် ထားမယ်၊သောက်တော်ရေချမ်းလေးကိုလည်း အမြဲတမ်းအေးနေအောင်ထားမယ် ဆိုရင်အိမ်တွင်းရေးလည်း အေးချမ်း၊စီးပွားလမ်းလည်းဖြောင့် ၊အစစအရာရာ အဆင်ပြေမှာပါ။ သောက်တော်ရေ တနေ့ ဘယ်နှစ်ခါလဲတုံး။“နှစ်ခါ”။နှစ်ခါလဲတဲ့သူ တော်တော်နည်းမယ်ထင်တယ်နော်။ကဲ…ကိုယ်ကတော့ “ရေ” တနေ့ဘယ်နှစ်ခါ သောက်တုံး။“ဆယ်ခါ”။တော်တော်တရားတယ်။ဘုရားကျတော့
Comments Off on မေတ္တာကြီးလေ အချစ်ကံကောင်းလေပေါ့-အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီတောရ)
မေတ္တာကြီးလေ အချစ်ကံကောင်းလေပေါ့။ “ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမချစ်နဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မမုန်းနဲ့” ချစ်ရတာလည်းဒုက္ခ မုန်းရတာလည်း ဒုက္ခပါပဲ။ ချစ်သူကိုမတွေ့ရရင် စိတ်ပူလောင်ရသလို မုန်းသူကိုမြင်ရရင်လည်း စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်ရင်တော့ ချစ်သူကွဲဆင်းရဲ ဆိုတာ လုံးဝမရှိနိုင်တော့သလို… ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းရင်တော့ မုန်းသူကွဲ ဆင်းရဲ ဆိုတာလည်း လုံးဝ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး…။ အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီတောရ) Unicode >>> မတ်ေတာကွီးလေ အခဈြကံကောငျးလပေေါ့။ “ဘယျသူ့ကိုမှလညျးမခဈြနဲ့ ဘယျသူ့ကိုမှလညျး မမုနျးနဲ့” ခဈြရတာလညျးဒုက်ခ မုနျးရတာလညျး ဒုက်ခပါပဲ။ ခဈြသူကိုမတှရေ့ရငျ စိတျပူလောငျရသလို မုနျးသူကိုမွငျရရငျလညျး စိတျဆငျးရဲရပါတယျ။ ဘယျသူ့ကိုမှ မခဈြရငျတော့ ခဈြသူကှဲဆငျးရဲ ဆိုတာ လုံးဝမရှိနိုငျတော့သလို… ဘယျသူ့ကိုမှ မမုနျးရငျတော့ မုနျးသူကှဲ ဆငျးရဲ ဆိုတာလညျး လုံးဝ မရှိနိုငျတော့ပါဘူး…။ အရှငျဆန်ဒာဓိက(ရှပေါရမီတောရ)
သံဃာတော်တွေကို ပြစ်မှားလို့ လက်ရှိဘ၀မှာပင် ခံစားရတဲ့အကုသိုလ် တရားတွေပါ
Comments Off on သံဃာတော်တွေကို ပြစ်မှားလို့ လက်ရှိဘ၀မှာပင် ခံစားရတဲ့အကုသိုလ် တရားတွေပါ
မြတ်ဗုဒ္ဓသည်သည်လည်း အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်က မစင်ကြယ်သော်လည်း အလှူပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘက်က စင်ကြယ် လျှင် အကျိုးကြီးသည်ဟု ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဤသို့မဟုတ်ဘဲ မိမိမြင်ဖူးကြားဖူး တွေ့ဖူးသည့် ရဟန်းတစ်ချို့ကို ကြည့်၍ ရဟန်းအားလုံးအတူတူပဲဟု သတ်မှတ်ပြီး ပြစ်မှားမိပါက ရန်မီးလောင်ခံရသည့် အကြောင်းကို အောက်ပါဖြစ်ရပ် မှန်ဇာတ်လမ်းအားထပ်မံ၍ တင်ပြပါဦးမည်။ “ နှုတ်မစောင့်သော မိန်းမချော” ရုံးဆင်းချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် လိုင်းကားပေါ်တွင် ခရီးသည်များ ပြည့်ကျပ်နေသည်။ ကားပေါ်တွင် သက်တော်သုံး ဆယ်ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိသေးသည့် ရဟန်းတစ်ပါးလည်းလိုက်ပါလာသည်။ ကားအရှေ့ပိုင်းရှိ “သံဃာတော်များကို ဦးစားပေးပါ”ထိုင်ခုံတွင်လည်း ဦးထားသည့်သူကရှိနေသည်။ ထို့အပြင်ထိုနေရာသို့ရောက်အောင်သွားဖို့က ပြည့်ကျပ်နေသည့်လူတွေထဲ တိုးဝှေ့၍သွားရမည် ဖြစ်သည့် အတွက် မလွယ်ကူလှပေ။ ပြီးတော့မကြာမီ ဆင်းရမည့်မှတ်တိုင်သို့ရောက်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် အလယ်လောက်မှာ ပင် အပေါ်တန်းကိုကိုင်၍ လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ လိုင်းကားကထုံးစံအတိုင်း နောက်ကားကျော်မတက်အောင် အပြင်းမောင်းနေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘရိတ် တစ်ချက်
ငါးပါးသီလကို ကျူးလွန်ခြင်း၏ အပြစ်များ
Comments Off on ငါးပါးသီလကို ကျူးလွန်ခြင်း၏ အပြစ်များ
အရာရာတိုင်းတွင် ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးပြစ် တို့သည် ရှိတတ်ကြစမြဲဖြစ်သည်။ ငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းခြင်းအတွက် ကောင်းကျိုးများရှိသကဲ့သို့ ငါးပါးသီလကိုကျူးလွန်ခြင်းအတွက် ဆိုးပြစ်များ လည်း ရှိလေသည်။ ကျွန်တော်သည် ငါးပါးသီလ စောင့်ထိန်းခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများကို မနောမယ ဂျာနယ်တွင် ရေးသားခဲ့ဖူးလေသည်။ စာဖတ်သူများ က ငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းရန်လွယ်ကူသကဲ့သို့ ဖျောက်ဖျက်ရန်လည်း အလွန်လွယ်ကူကြောင်း။ ထို့ ကြောင့် ဖျောက်ဖျက်ခဲ့လျှင် ကျူးလွန်ခဲ့လျှင် မည် သည့်အပြစ်များ ဖြစ်နိုင်သည်ကို ဆက်လက်၍ ရေး သားပေးပါရန် တိုက်တွန်းလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ငါးပါးသီလအား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း၏ အပြစ် များကိုလည်း ဆက်လက် ရေးသားတင်ပြအပ်ပေ သည်။ ငါးပါးသီလအား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း၏ အပြစ်များမှာ အကျဉ်းအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်လေသည်။ ၁။ များစွာသော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့မှ ဆုံးရှုံးပျက်
မန္တလေးမြို့ညောင်ကွဲရပ်ကွက်ရှိ ကျူးတဲတွေမှာ ငွေမိုးတွေရွာ ပြီး အလှူဒါနပြုခဲ့ ဗီယက်နမ်ဘုန်းကြီး ဦး​ဆောင်​​သောအဖွဲ့
Comments Off on မန္တလေးမြို့ညောင်ကွဲရပ်ကွက်ရှိ ကျူးတဲတွေမှာ ငွေမိုးတွေရွာ ပြီး အလှူဒါနပြုခဲ့ ဗီယက်နမ်ဘုန်းကြီး ဦး​ဆောင်​​သောအဖွဲ့
ညောင်ကွဲရပ်ကွက်ရှိ ကျူးတဲဖြင့်​နေထိုင်ပြီး အမှန်တကယ်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၁၀၀)အား ဗီယက်နမ်ဘုန်းကြီး ဦး​ဆောင်​​သောအဖွဲ့မှ အိမ်​​ထောင်​စု တစ်စုလျှင် ငွေကျပ် (၁၀၀၀၀၀)ကျပ်စီ လိုက်လံဝေငှ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ညောင်ကွဲရပ်ကွက် မြို့ပတ်လမ်းအနောက်ဘက်ဘေးတွင် ကျူးတဲဖြင့်​နေထိုင်ပြီး အမှန်တကယ်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၁၀၀)အား ဗီယက်နမ်ဘုန်းကြီး Mr. Nguyen Ba Vinh၊ ဗီယက်နမ်သီလရှင် Mrs. Mal Ngoc Kieu တို့ ဦး​ဆောင်​​သောအဖွဲ့မှ အိမ်​​ထောင်​စု တစ်စုလျှင် ငွေကျပ် (၁၀၀၀၀၀)ကျပ်စီ မတ်​လ ၁၇ရက်​ မွန်းလွဲ ၂နာရီက လိုက်လံဝေငှ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့​ကြောင်း သတင်းရရှိသည်​။ Ref : The Mandalay News. =========================== ညောငျကှဲရပျကှကျရှိ
Comments Off on သိန်း ၃၀ ပေးဝယ်တာတောင် မရောင်းဘဲ ဘေးမဲ့ပေးသွားတဲ့ နွားပိုင်ရှင်များ
မြတ်သောစေတနာကို..သာဓုခေါ်ပေးကြပါလား ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့ရှင် ဒီနွား ၂ ကောင်ကို သိန်း ၃၀ ပေးဝယ်တာတောင် မရောင်းဘဲ၁၃ ရက်နေ့က လှည်းကူး သစ်နီပင် စေတနာရွာတွင် ရှိသော သန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဘေးမဲ့မြေတွင် အရှင်ပညာသီရိ ဦးဆောင်ပြီး ကယ်တင်ထားသော မုဒိတာပုံရိပ် တရားရိပ်သာဘေးမဲ့ဂေဟာသို့လာရောက်ပြီး ထိုနွားနှစ်ကောင်အား ဘေးမဲ့ပေးသွားတဲ့ နွားပိုင်ရှင်များဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးမပြုတော့တဲ့သူတို့ကလေးတွေကို များပြားလှတဲ့အသာပြာကိုတောင်မမက်မောဘဲ အကြင်နာတရားထားကာစာနာပေးသော သခင်များနှင့် တွေ့ဆုံရတာ နွားလေးနှစ်ကောင်ရဲ့ ကုသိုလ်ကံပါဘဲ။ ဘေးမဲ့ပွဲနေ့ကျရင်လဲ သူတို့ကလေးတွေပါ ဘေးမဲ့ပွဲထဲထည့်ပေးဖို့။သူတို့လဲ လာကြည့်ပါရစေလို့ ပြောသွားရှာတယ်။ မွန်မြတ်လှတဲ့စိတ်ထားပိုင်ရှင်များ ဤကောင်းကျိုးအားဘဝပေါင်းများစွာ ခံစားရပါစေ။ ဤကံကောင်းလှသော နွားလေးနှစ်ကောင်လဲ ဘေးမဲ့တောမှာသက်တမ်းစေ့အေးချမ်းပါစေ။ ဒီအကြောင်းလေး အကျိုးဆောင် ဦးလေး လှမ်းပြောပြတော့ အရမ်းပီတိဖြစ်သွားလို့ သူငယ်ချင်းတွေလဲပီတိဖြစ်ရအောင် post တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Credit—-Kyaw Tin Zar Ko ============================
” ဘာသာရေးမှိုင်းကို ကျော်လွန်နိုင်စေသော- “ဗုဒ္ဓ၏ အံ့သြဖွယ် မိန့်ခွန်းတော် “
Comments Off on ” ဘာသာရေးမှိုင်းကို ကျော်လွန်နိုင်စေသော- “ဗုဒ္ဓ၏ အံ့သြဖွယ် မိန့်ခွန်းတော် “
ကောင်းလိုက်တာ..ဒါမျိုးမှမဖတ်ရ ” ဘာသာရေးမှိုင်းကို ကျော်လွန်နိုင်စေသော- “ဗုဒ္ဓ၏ အံ့သြဖွယ် မိန့်ခွန်းတော် ” “ဗုဒ္ဓ”သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့် ဘာသာ အယူဝါဒ ထူထောင် ဖွဲ့စည်းသူမျှ မပြုလုပ်ဝံ့၊ မပြုလုပ်နိုင်သော “ထူးခြားအံ့ဖွယ် ကမ္ဘာကျော်မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်” ကို ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ဟောကြား ခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကောသလတိုင်း၊ ကေသမုတ္တိရွာသား၊ ကာလာမလူမျိုးတို့ကို ဟောကြား သော “ကာလာမသုတ္တန်” သည် “အမှန်တရားကို ရှာဖွေသူတစ်ဦးထံသို့ ဗုဒ္ဓ၏ လက်ဆောင်လမ်း ညွှန်ချက် ” တရားတို့ပင် ဖြစ်သည်။ ဤ သုတ္တန်တရားတော် မှ ဗုဒ္ဓ၏မိန့်ခွန်းသံသည် အတွေးအမြင် မှုန်ဝါးနေသူကို အလင်းရောင်ခြည် ရစေသော “မီးရှုးတန်ဆောင်ပမာ ” ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရေး ထုံးတမ်းစဉ်လာကြားတွင် တွေဝေ
ပြည့်တန်ဆာနှင့် ၀ိပဿနာ (အရမ်းကောင်းတဲ့စာလေးမို့ခဏလေးဖတ်ကြည့်ပေးပါ။)
Comments Off on ပြည့်တန်ဆာနှင့် ၀ိပဿနာ (အရမ်းကောင်းတဲ့စာလေးမို့ခဏလေးဖတ်ကြည့်ပေးပါ။)
ပြည့်တန်ဆာနှင့် ၀ိပဿနာ (အရမ်းကောင်းတဲ့စာလေးမို့ခဏလေးဖတ်ကြည့်ပေးပါ။) လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၅၀၀ကျော်လောက်က တကယ့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လေးတစ်ပုဒ်ကို အရင်ပြောပြရအောင်ပါ။ ကာလအနေနဲ့ပြောရင် မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူနေတဲ့ ကာလပါ။ ပြည်က ဝေသာလီပြည်မှာပါ။အဲဒီကာလ အဲဒီဝေသာလီပြည်မှာပဲ “မ၀ိမလာ” လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၀ိမလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်က အညစ်အကြေး ကင်းစင်သူ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူပါ။ ဒါက တင်စားထားတဲ့ ရုဠီ နာမည်ပါ။ တကယ့်အရှိ အနွတ္ထအမည် မဟုတ်ပါဘူး။၀ိမလာဟာ ဝေသာလီပြည်မှာ အလှဆုံးစာရင်းဝင် တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အမေဖြစ်သူက ပြည့်တန်ဆာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သူလည်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ မိခင်ရဲ့အလုပ်ကို ဆက်လုပ်ရပါတယ်။ ၀ိမလာဟာ ဝေသာလီပြည်သားတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာလည်း” ၀ိမလာ ၊၀ိမလာ ” ဆိုပြီးရေပန်းစားနေပါတယ်။ ၀ိမလာရဲ့ဆီကို သူဌေးသူကြွယ်တွေလောက်ပဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ သာမန်လူတွေ တော့ မသွားနိုင်ပါဘူး။ ၀ိမလာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း